August 21, 2019 admin Wararla Gudaha 0
6 Bilood ka dib markii ay dowladda Soomaaliya la soo wareegtay isbitaalka Banaadir ayaa waxaa sii kordhay tirada bukaanka adeega u soo doonta isbitaalka, waxaana is bedelay bilicda isbitaalka iyo guud ahaan nidaamka maamulka isbitaalka.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada oo u xilsaaran in bulshada soomaaliyeed ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo sare leh, ayaa la soo wareegtay isbitaalka Banaadir Febraayo 2019 si bulshada soomaaliyeed u helaan daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah oo tayo leh.
La soo wareegitaanka Dowladda Soomaaliya ay la soo wareegtay Isbitaalka Banaadir ayaa qeyb ka ah himilooyinka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Bulsshada oo xaqiijineysa daadijinka adeega bulshada ee aas aasiga ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaal lagu kordhinayo adeegyada caafimaad ee isbitaalka Banaadir, waxaa dhawaan la furayaa xaruunta sifeynta kiliyaha oo qeyb ka noqon doonta adeegyada lacag la’aanta ah ee uu isbitaalku siiyo bulshada soomaaliyeed, sida ay xaqiijiyeen howl wadeennada tubta horumarinta arrimaha bulshada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale meel fiican marinaysa dhismaha Bankiga dhiigga qaranka oo dhawaan la dhisi doono si loo kordhiyo loona tayeeyo adeegyada caafimaad ee dowladdu siiso bulshada Soomaaliyeed.
Dowladda waxa ay Shacabka soomaaliyeed ka codsanaysa in ay gacan ka geystaan sidii loo soo celin lahaa xaruumaha adeegyadii bulshada ee aas aasiga ah si bulshadu hesho adeegyo tayo leh oo lacag la’aan ah.